Umlingisi waphesheya uzodlala indawo kamama kaTrevor Noah | News24
Umlingisi waphesheya uzodlala indawo kamama kaTrevor Noah
eMelika - ULupita Nyong’o uyena mlingisikazi okuthiwa uzodlala indawo kamama kaTrevor Noah kwifilimu emayelana nempilo yalo somahlaya eyaziwa ngokuthi, yiBorn a Crime.
UNoah, ongumethuli we-The Daily Show, wabhala incwadi yakhe yokuqala emayelana nempilo yakhe eyaphuma ngonyaka odlule.
Le ncwadi yaba yimpumelelo kangangokuba wahlabana nendondo eyaziwa ngokuthi yiJames Thurber Prize ye-American Humor kanye nezindondo ezimbili zama-NAACP Image Awards.
Kuthiwa lo somahlaya wakuleli uhlela ifilimu esuselwe kuyona le ncwadi, ezophrojuswa yinkampani yakhe i-Ark Angel Productions kanti uzosebenzisana noNorman Aladjem, uDerek Van Pelt kanye noSanaz Yamin abasebenzela iMainstay Entertainment, kanye nayo le ntokazi yakwaNyong’o.
OLUNYE UDABA: Abalingisi befilimu iBlack Panther balibangise kuleli
Ngokubika kwephephandaba iDeadline, abachicileli bale ncwadi iSpiegel & Grau bathi kukhona eminye emibhalo kaNoah ezoshicilelwa ngaphansi kwenkampani iRandom House ngomhlaka-13 Novemba.
Le ntokazi ibhale enkundleni yezokuxhumana uTwitter ukuveza izindaba ezimnandi zokuthi izolingisa kule filimu, kubika iSowetanLive.